I-MOD iqalisa iqela liqala kumdlalo omkhulu | I-NAB bonisa iindaba | I-2020 NAB bonisa iqabane leMedia kunye noMvelisi weNAB Veza UKUPHILA. Iindaba zoSasazo lobuNjineli
Ikhaya » iindaba » I-MOD iqala itheko liqale kumdlalo omkhulu
I-VFX kunye nokugqibezela istudiyo kubeka iveki evekini kwibhodi yamanqaku eRaymond James Stadium kwindawo evulekileyo yokuvula umboniso wehafu.
I-ATLANTA- Lo nyaka wePepsi Super Bowl LV Halftime Show uqalise umbulelo ongalibalekiyo kwinxalenye ye-wizardry yeMOD. Isitudiyo sokuphumelela amabhaso sibonelela ngeenkonzo zokuboniswa ngokulandelelana kokuvula okuqaqambileyo apho iThe Weeknd ibonakala emva kwevili lesikhewu seMercedes phakathi kwesixeko esimenyezelayo.
Ekhokelwa nguAlex Lill kwaye iveliswe nguBrendan Garrett, ulandelelwano olumnandi, olunjengephupha lubonisa umbono wesitayile seLas Vegas Strip ezele yimiqondiso ekhanyayo ye-neon kunye neekhasino ezinde. Njengoko i-The Weeknd ishiya imoto yakhe kwaye ihlala esitulweni ebhodini, eyimfihlakalo, enamehlo abomvu, enezambatho ezidadayo ezantsi zivela phezulu. "Ndenze iintengiso ezimbalwa zeSuper Bowl kwikhondo lomsebenzi wam, kodwa ibilixesha lokuqala ukubandakanyeka kumdlalo ngokwawo," utshilo uMlawuli woBuchule beMOD uLes Umberger, obekade ejonge iziphumo. “Yimbumbulu enkulu enombono! Injongo yethu yayikukuhambisa iqhekeza le-cinema eliza kuhlangana nabantu kwihlabathi liphela. Zonke iinkcukacha ziyilelwe ngokuchanekileyo, zenziwe ngomcholo kwaye zenziwa, kodwa imbonakalo imnandi kwaye inamanzi. ”
Ulandelelwano luthathe iiveki ukuba lucwangcise kwaye lubandakanye amahlumelo aphilayo kunye nokujikeleza kweewotshi kunye neeseshoni ezibonakalayo kwizitudiyo zeMOD eAtlanta. I-Umberger yayisetelwe ukuveliswa kwentshukumo ephilayo kwaye yasebenzisa indawo yokusebenza ephathekayo yeLangatye ukujonga kwangaphambili indibaniselwano kunye nokuthumela izinto kwakhona kwiqela leziphumo ezibonakalayo. "Kwakukho izinto ezininzi ezihambayo kwaye umsebenzi wethu yayikukuqinisekisa ukuba yonke into iyahambelana nombono," utshilo. “Yinzame enkulu yokusebenzisana phakathi komthengi, imveliso, isebe lezobugcisa kunye neqela lethu. Akukho nto ingahoywanga kwaye iziphumo ziyamnandi. ”
Umberger uzisa umxholo oqaqambileyo, ucwangciso olucokisekileyo kunye nolungelelwaniso olusondeleyo lwempumelelo. "Yayiyindlela engalindelekanga kwaye ipholile ngokumangalisayo yokuqalisa umdlalo weHalftime Show," utshilo u-Umberger. Olu lungelelwaniso yinto entsha ngokupheleleyo kumava omboniso weSiqingatha seXesha.
I-MOD ikwadibene noLill kunye noGarrett kwindawo ye-whimsical teaser ye-Halftime Show. Ibonisa iVeki kwitafile yekhefi embindini webala lebhola. Sele eza kutya xa, ngokungaqondakaliyo, eyokuqala, emva koko ezininzi, emva koko amakhulu ebhola ekhatywayo emvula evela phezulu. Umberger ukhumbula oku: “Sasiyithanda le ngcamango. "Iqela lethu liphefumlelwe ukuba lenze kakuhle. Yindibaniselwano entle yeziphumo ezibonakalayo kunye neCG, isenza ukuba kube nzima ukuxela into eyiyo. ”
Umsebenzi we-Super Bowl weMOD weza kwizithende zeeprojekthi zevidiyo zomculo eziphezulu, nganye izaliswe ziimpawu ezibonakalayo. Babandakanya ezikaDrake Hleka ngoku ukhale kamva (kunye noLil Durk), Ebonisa iinkwenkwezi zemidlalo uKevin Durant, u-Odell Beckham Jr. kunye noMarshawn Lynch kwaye ibekwe kwikomkhulu lehlabathi laseNike eOregon. Isitudiyo sanegalelo kuTravis Scott Franchise, eyavela kwi IMAX zemidlalo yeqonga phambi kokuba kuhlolwe Ishumi (Iziphumo ezongezelelekileyo ezibonakalayo ezibonelelwa yi-Ingenuity Studios) kunye neAriana Grande's kwizikhundla (Iziphumo ezongezelelweyo ezibonakalayo ezinikezwe yiGhost VFX.).
Iividiyo zikaDrake kunye neAriana Grande zazikhokelwe nguDave Meyers, umdibanisi we-MOD rhoqo. UTravis Scott kunye no-White Trash Tyler bayalelwe Franchise. Zonke zaveliswa yiFREENJOY. Umsebenzi wesitudiyo kwezi projekthi zintathu zaqala kwiziphumo ezinkulu, ukuya kwiziphumo ezintsonkothileyo kodwa ezingabonakaliyo zokunceda umgca wamabali, kuyilo lwezihloko. Umberger uthi: “Siyakuthanda ukusebenza kwiiprojekthi ezinje. "Banika amagcisa ethu amathuba okuba ubugcisa babo buqhubeke ngokungakhathali."
Ngelixa laziwa kakhulu ngefuthe eliphezulu, elingalibalekiyo, imiboniso ebonakalayo yokumisa, iMOD ikwanobuchule ngokulinganayo ekusebenzeni kwimifanekiso efihlakeleyo, enefuthe kwiiprojekthi zentengiso. Ukuqwalaselwa kwayo kweenkcukacha kunye nokwenza ngaphandle komthungo kungqinwa ngumsebenzi wakutshanje kaReebok, Yves Saint Laurent noRalph Lauren. U-Umberger uthi: "Abathengi bethu kunye nabarhwebi bayayithanda intsebenziswano, inkcubeko-ethe-ngqo yenkcubeko esembindini weMOD kwaye siyakuxabisa ukuzinikela kwethu ekuziseni ezona zinto zilungileyo kuwo wonke umfanekiso," utshilo u-Umberger. Isoloko ingumsebenzi olungileyo weempawu ezingaphantsi komgangatho onceda ukuthatha ubuhle buye kwinqanaba elilandelayo. Thina phila ngalo nto."
I ntengiso iividiyo zomculo isitya esikhulu Iimpawu Zobonakaliso 2021-02-19
Previous: IDaVinci Resolve Studio ixhasa iiNice Shoes 'ezikude zeMveliso yokuSebenza
next: I-Quicklink iyanda eMelika ngokuvulwa kweofisi yase-US